Kolontsaina sy asa tanana: mbola ady sarotra ny hamelona ny tsena - ewa.mg
Kolontsaina sy asa tanana: mbola ady sarotra ny hamelona ny tsena
News - Kolontsaina sy asa tanana: mbola ady sarotra ny hamelona ny tsena
Iray amin’ireo sehatra
nitondra faisana noho ny fisian’ny valanaretina Covid-19 ny
kolontsaina sy ny asa tanana. Miainga any amin’ny mpanamboatra ka
hatrany amin’ny mpivarotra, mahita fa mbola ho mafy ny
Manomboka misokatra ny lalana
ahafahana mivezivezy eto Madagasikara. Toa milaza izany fa
hisokatra ihany koa ny sehatra sasany toy ny kolonttsaina sy ny asa
tanana. “Efa tsara ny fanapahan-kevitra, saingy tsy mora ny
hamelona sy hamerina indray ny lalam-barotra sy ny tsena”, hoy
Andrianaivo B, mpivarotra asa tanana mifandraika amin’ny
kolontsaina malagasy toy ny sokitra, ny karazana amponga vita
amin’ny hoditra, ny korintsana, ny jiafotsy, sns. Nambarany fa tsy
mbola ampy hanodinana ny tsena ny zava-misy ankehitriny satria
saika vahiny avy any ivelany avokoa ny mpanjifa “matanjaka” ny
entana amidin’izy ireo.
“Manondrana mankany amin’ny
faritany ihany izahay kanefa hatreto, tsy mbola tonga ny mpaka
entana satria mbola tsy misy mpizahatany tonga ihany koa any
amin-dry zareo”, hoy hatrany ity mpivarotra asa tanana ity. Ny
mpividy asa tanana malagasy avy eto an-dRenivohitra ihany izany no
antenaina hanjifa ny entana. “Mbola ady varotra goavana be vao
mahalafo korintsana iray ianao”, hoy izy.
Nohazavain’Andrianaivo Bertoh fa
mbola raharaha goavana ihany koa ny mahazo ireo mpivarotra fotsiny
asa tanana fa tsy mpanamboatra. “Lasa manao raharaha hafa toy ny
fiompiana sy ny fambolena any ambanivohitra ireo mpanao asa tanana
noho ny tsy fisian’ny tsena tao anatin’ny dimy volana mahery”, hoy
izy. Misy amin’ireo ny te hampifamadika ny rasa ka io fiompiana sy
fambolena io no tena ataony fameloman-tena fa vadin’asa kosa ny
fanaovana asa tanana. “Rehefa kelikely eo, raha toa ka miverina soa
aman-tsara ny tsena, hiteraka olana ho anay io tranga io satria
mety tsy hifanaraka amin’ny tinady ny tolotra, na eo amin’ny
kalitaony izany (mety ho zara fa vita) na eo amin’ny isany (mety ho
tsy ampy)”, hoy hatrany izy. Mbola olana manaraka tsy maintsy
hovahana ihany koa izany!
… Fa nanterin’ity mpivarotra asa
tanana ity ihany koa fa olana manokana ho an’Antananarivo ny tsy
fijanonan’ny mpizahatany fotoana maharitra eto. Zary
toeram-pandalovana fotsiny eto an-dRenivohitra, hany ka na eto aza
no hamboarina ny asa tanana, tsy maintsy alefa any amin’ny faritra
ihany izany, hojifain’ny mpizahatany. “Mila ataon’ny
tompon’andraikitra izay hahatonga ity Renivohitra ity hahatamana
mpizahatany. Manana toerana manan-tantara Antananarivo. Manana
zavaboahary mahaliana, saingy izany rehetra izany, tsy ampy
fampahafantarana, hany ka zara raha mandany andro iray eto ny
vahiny”, hoy izy.
L’article Kolontsaina sy asa tanana: mbola ady sarotra ny hamelona ny tsena a été récupéré chez Newsmada.
Voatendry ho mpandrindra ny tetikasa ao amin’ny BNGRC, Andriamatoa Faly Aritiana Fabien. Voatendry ho tale misahana ny “Patrimoine et de l’administration ao amin’ny BNGRC kosa ny Général de Brigade Ramanantsoa Gabriel.Ankizy 157 tamin’ireo fokontany tao anatin’ny boriborintany VI no nahazo kopia maimaimpoana. Niarahana tamin’ny fikambanana Koloina ny hetsika.Maro ireo mponina sahirana ao an-toerana no nitaraina amin’ny tsy fananany ho enti-manana amin’ny fikarakarana ny kopian-janany, indrindra amin’ny fotoana hampidirana ny ankizy any an-dakilasy ka nanaovana ny hetsika.Teny amin’ny kaominina Ivato no nanaovana ny ezaka kopia faobe, tamin’ity herinandro ity, Manodidina ny 200 ireo ankizy sy olon-dehibe hisitraka izany avy amin’ireo fokontany 11 ao an-toerana. Dingana voalohany izao natao izao izay nanaovana ny fizahana ataon’ny dokotera avy amin’ny CSB Ivato. Efa fanao isan-taona ny ezaka kopia faobe izay hanentanana ireo olona tsy mbola manana izany.Hifarana anio ny andron’ny vaksiny faobe iarovana ny kilonga vao teraka ka hatramin’ny 5 taona amin’ny aretina lefakozatra. Ankizy 2 tapitrisa sy sasany amin’ny distrika 55 ao anatin’ny faritra 10 no hahazo ny vaksiny hanamafisana ny hery fiarovana sy hitsinjovana ny zaza malagasy. Mamindra amin’ny zaza 200 ny ankizy tsy vita vaksiny satria mbola ambony ny tahan’ny fangerena ankalamanjana mampiparitaka haingana ny valanaretina. Entanina ny reny sy ny mpikarakara zaza rehetra handray ny mpanao vaksiny satria hitety trano, sekoly ary ho tonga hatreny an-tsena izy ireny hanatrarana ny tanjona napetraka. L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.
Takalo dinika amorom-patana: omena lanja ny fomba amam-panao…
Mitohy hatrany fanandratana ny hasin’ny kolontsaina malagasy tanterahin’ny Foiben’ny Fikambanan’ny mpikabary malagasy maneran-tany. Ny alahady 20 septambra izao, amin’ny 4 ora tolakandro ka hatramin’ny 6 ora hariva (ora eto Madagasikara) no hiditra amin’ny andiany faharoa ny lohahevitra “ Ireo fombafomba amam-panao amin’ny kabary am-panambadiana sy ny tandindona fonosiny”. Anisan’ny hampiavaka ity Takalo dinika amorom-patana ity, ny handraisan’ireo faritany Fimpima ivelan’Antananarivo anjara. Hanan-karena ny dinika satria samy manana ny mampiavaka azy izy ireo raha eo amin’ny fomba amam-panao amin’ny kabary am-panambadiana. Hisoron’afo amin’izany i Romule Thomas, mpikajy ny fomban-drazana faritany Fimpima Antsiranana, i Totoroy François, talen’ny serasera sampana Fimpima Mbarakaly faritany Toamasina, i Vincent Merland, mpandalina ny fomban-drazana faritany Fimpima Toliara ary Rtoa Rakotondriaka Avotra, filohan-tsampana Fimpima Soavinandriana faritany Antananarivo.Ankoatra ny tambajotran-tserasera “Zoom” sy “facebook”, hampiasaina ihany koa ny “You Tube” amin’ny fanatanterahina ny Takalo dinika amorom-patana. Na izany aza, mila misoratra anarana mialoha ireo izay handray anjara mba hahafahana mandamina sy mandrindra ny takalo, raha ny fanazavan’ny mpikarakara.HaRy RazafindrakotoL’article Takalo dinika amorom-patana: omena lanja ny fomba amam-panao… a été récupéré chez Newsmada.
“Raha teo amin’ny tontolon’ny kolontsaina, iray amin’ireo olona akaiky an-dRamahafadrahona aho”, hoy Ramilson Dadafara, omaly. Raha ny nambarany, tao anatin’ny 10 taona eo ho eo no niarahan’izy ireo nanolotra ny fandaharana momba ny hiragasy tao amin’ny Radio Madagasikara (RNM). Ramahafadrahona rahateo no tompon’andraikitra sy nanatontosa io fandaharana io. “Tao anatin’izay fotoana naharitra izay, ireto toetra ireto no hitako sy tsapako tao amin-dRamahafadrahona. Olona be fitiavana, tia fihavanana, tsotra sy malemy fanahy ary mora mifandray aman’olona”, hoy hatrany i Dadafara. Nohamafisiny fa “ anisan’ny nahafinaritra ahy taminy dia ilay fandalana ny kolontsaina malagasy nentim-paharazana. Tena tiany io”.Nambaran’i Dadafara fa anisan’ny manome torohevitra olona maro Ramahafadrahona. Ataony am-pitiavana izany hany ka satry hihaino azy foana. Manana talenta amin’ny fitantarana ny zava-misy rahateo izy. “Iray amin’ireo tena nahaliana ahy tamin’ireo notantarainy, ohatra, ny fizotran’ireo seho nataony tany ivelany. Nambaran-dRamahafadrahona tamiko tamin’izany fa marobe tokoa ny vahiny no liana sy voasariky ny vakodrazana malagasy”, hoy hatrany i Dadafara Hiragasy.Raha ny fijoroana vavolombelona nataon’i Dadafara, marobe ireo nandray sy nanovo soa tamin-dRamahafadrahona teo amin’ny tontolon’ny kanto.HaRy RazafindrakotoL’article Niara-niasa nandritra ny 10 taona mahery: « Tsotra sy malemy fanahy Ramahafadrahona », hoy i Dadafara a été récupéré chez Newsmada.